I MORI IN CAPPIDOGLIO Rente amagumbi Green Room
Ipropathi ibekwe kwindawo esembindini nethandwayo "La Via Campidoglio" apho iinkonzo ezahlukeneyo zifikeleleka: iipizza, iirotisseries, imivalo, iivenkile zokutyela, iivenkile ezinkulu, iibhaka, abathengisi beentlanzi, iiboutiques ezahlukeneyo zabantu abadala kunye nabantwana, iibhanki, iposi, icuba, ukubheja. iivenkile, tivela, stat. Uloliwe, ibhasi, imarike yasekhaya ngoLwesibini kwindawo ekufutshane apho kukho iigadi, iivillas, iparkGames, iiklabhu, iilidos ezinezixhobo, iilwandle, izibuko, kwaye ngokubhukisha kukuvumela ukuba ufikelele kwiZiqithi zeAeolian.
isakhiwo esisondeleyo kumapolisa: iCarabinieri, iPolisa, iPolisa kaMasipala kunye ne-Fire Brigade kwi-600 yeemitha. ezinye iinkonzo zibekwe malunga neemitha ezingama-600 ukusuka eSibhedlele, iHolo yeDolophu, iGallego Castle kunye neVincenzo Consolo Museum, kunye nolwandle olungamamitha angama-200 ukusuka ehotele kukho ulwandle apho imiboniso eyahlukeneyo yedolophu ihlelwe ngokuhlwa.
kumagumbi uya kufumana: ibhafu ye-bubble, i-shampoo, isethi yeetawuli ezi-3, itawuli enkulu yaselwandle, i-toothbrush, i-make-up detergents, i-sunscreen .... kunye nokutshintsha kunye nezinto eziyimfuneko zokucoca ixesha elide leeholide.
Ubumelwane yindawo efunwa kakhulu kumbindi kuba ibonelela ngeenkonzo ezininzi ezifikelelekayo ngeenyawo kwaye ingaphezulu kwayo yonke ikufutshane nolwandle.
ekhoyo kwiselula, Whatsapp, sms phantse ekhoyo kwisakhiwo iyafumaneka ukuze ulwazi olwahlukeneyo ukufikelela kwiilali ezahlukeneyo ezikufutshane ezifana: Capo D'Orlando, Torrenova, Caronia, S.Stefano di Camastra apho ungafumana iiseramikhi eqhelekileyo, Tusa, Cefalù, Taormina kunye nabanye abaninzi. ifikeleleka lula ngezithuthi zikawonke-wonke kufuphi nesakhiwo kunye neziqithi ziyakwazi ukufumana unxibelelwano kwisakhiwo.
ekhoyo kwiselula, Whatsapp, sms phantse ekhoyo kwisakhiwo iyafumaneka ukuze ulwazi olwahlukeneyo ukufikelela kwiilali ezahlukeneyo ezikufutshane ezifana: Capo D'Orlando, Torrenova,…